शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : कानुन त बनाउन सक्नु भएन कसरी हुन्छ निर्वाचन ?
२२ पुस । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलीय एकता कायम गरेर संविधान कार्यान्वयनतर्फ गम्भीर बन्न शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेतालाई बिहीबार साँझ शीतल निवास बोलाएर संविधान संशोधन, संसद् सुचारु, निर्वाचन मिति तथा निर्वाचन कानुनका विषयमा ..
२२ पुस । एक किलो मात्रै किन्नुपर्ने बाध्य गहना व्यवसायीले अब टुक्रा सुन पनि खरिद गर्न पाउन..
एनजिओको आसमा सरकारी राहत छाड्ने दुःखमा
२२ पुस । दोलखा फूलबारी बस्तीका ३३ वर्षीय मीनबहादुर तामाङले सरकारी अनुदानको ५० हजार रुपैयाँ..
२२ पुस । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा सिंहलाई दाइजो दिएको छाउनीस्थित १५ रो..
नेपाल चीनसँग नजिक हुँदै गएको छ : भारतीय थिंक ट्यांक
२२ पुस । भारतको एक अग्रणी थिंक ट्यांकले सार्क सदस्य राष्ट्रहरु त्यसमा पनि विशेषगरी नेपालमा..
२२ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र उसका सहयोगी आठ दलले संविधान संशोधन विधेयक विभाजनकारी भएको भन्दै सदनसँगै शुक्रबार सडकमा समेत प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै गठबन्धन सरकारले मधेसी मोर्चाको सहयोगबाट त्यसलाई पारित गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक भिडन्तको नयाँ आयाम सुरु भएको छ । एमालेले साथ नदिए पनि प्रधानमन्त्..
संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सहमति
२२ पुस । सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन विधेयक पुस २४ गते संसद्मा पेस गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठकमा दलहरूबीच सो सहमति भएको हो । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले संसद्को बाटो खोलिदिएको विश्लेषण गर्दै बैठकले ..
२१ पुस । निलम्बित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदमा पेश गरेको बायोडाटामा उल्लेखित केही विवरण झुटो भेटिएको छ। उनले बायोडाटामा आफ्नो कार्यअनुभवलाई मुख्य रूपमा उल्लेख गरेका छन् उक्त विवरण नै झुट हो । कार्कीले संवैधानिक परिषदमा पेश गरेको बायोडाटामा सन् २००६ को अप्र..
२१ पुस । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले आगामी २८ माघमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। गत साता काठमाडौं आएको चिनियाँ सेनाको टोली र नेपाली सैनिक अधिकारीको बैठकमा चीनले उक्त मिति प्रस्ताव गरेको हो। स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मितिमा नेपाली सेनाले सहमति जनाएको छ। तर, चिनियाँ सेनासँग अर्को बैठकमा सैन्य अभ्यासको मिति, स्थान र प्र..
फ्रि भिसा र टिकट कागजमै सीमित
२१ पुस । मलेसियासहित कतार, साउदी अरब, दुबई, ओमन र बराइनमा कामदार पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले फ्रि भिसा र टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । म्यानपावर कम्पनीले यी देशमा कामदार पठाउँदा सेवा शुल्क बापत मात्र १० हजार रुपैयाँ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग लाख रुपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । सरकारी निकायमा पेश गर..
एक महिनामा बिदेशिए ६६ हजार युवा
२१ पुस । वैदेशिक रोजगारीका लागि मंसिरमा करिब ६६ हजार युवा विभिन्न मुलुक गएका छन् । देशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा कामका लागि विदेश जाने युवाको संख्या यति धेरै भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मंसिर महिनामा मात्रै वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर ६५ हजार आठ सय ९१ युवा कामको खोजिमा बिदेसिएका छन् । […]
२१ पुस । नेपाली सेनाले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचा वरिपरि रहेका सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन नगरी त्यस क्षेत्रमा संसद भवन बनाउन अस्वीकार गरेको छ । पुतली बगैंचामा नयाँ संसद भवन बनाउन उक्त ठाउँ खाली गरिदिन संसद सचिवालयले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै सेनाले त्यसवरिपरि रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र सेनाका निकायको व्यवस्थापन ..
‘झोलामा खोला’ राख्नेमा सरकार नै अगाडि, २३८ जलविद्युत् आयोजना सरकारी बास्केटमा
२१ पुस । ऊर्जा संकट समाधानका लागि भारतमा निर्भर रहनुपरेको विद्यमान अवस्थामा स्वदेशी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुको साटो सरकार आफैं होल्ड गरेर बसेको पाइएको छ । सरकारले होल्ड गरेका, अध्ययन गरिरहेका र अनुमतिपत्र खारेज भएका गरी २ सय ३८ वटा जलविद्युत् आयोजना विद्युत् विकास विभागको बास्केटमा थन्किएर बसेका हुन् । सरकार आफैं ..
सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश: बेपत्ताको अंश नामसारीको कानुन बनाऊ
२१ पुस । सर्वोच्च अदालतले बेपत्ताको अंश परिवारका व्यक्तिका नाममा सार्ने व्यवस्थाका लागि कानुन बनाउन बुधबार सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।सर्वोच्चले बेपत्ता व्यक्ति कानुनतः बाह्र बर्षसम्म नफर्केमा हकवालाले अंश बाँडीचुडी खाने व्यवस्था गर्न पनि परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र र केदार चालिसेको संयुक्त इजलासले पीडित..
सरकारलाई प्राधिकरणका सिइओको सीधा जवाफ
२१ पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने कारण र आधार नभएको जवाफ सरकारलाई दिएका छन् । कानुनले तोकेको दायरा नाघेर कुनै काम नगरेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा मैले सम्पादन गरी आएको भूमिकालाई सन्तोषजनक नरहेको भन्न कुनै पनि..
२१ पुस । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबुल भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै दर्ता भएको संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख विपक्षीसहित नौवटा दलले सदन र सडक आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सरकारले विधेयक पारित गराउने रणनीतिअनुसार..
संविधानको धारा २७४ खारेज गर्न मोर्चाको प्रस्ताव, के छ धारा २७४ मा ?
२१ पुस । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधानको धारा २७४ नै खारेज गरेर भए पनि प्रदेश सीमांकनमा देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध फुकाउन प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संविधानको धारा २७४ को व्यवस्थासमेत आकर्षित हुने तर्कसहित सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी ग..
नआत्तिनुस, रातो नम्बरबाट फोन आउँदैमा !
२० पुस । सामाजिक सञ्जालमा अहिले रातो नम्बरको आतङ्क व्यापक बन्दै गएको छ। मोबाइल प्रयोगकर्तालाई रातो नम्बरबाट फोन आउने र त्यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम हुने भन्दै विशेषगरी फेसबुक र ट्वीटरमा प्रचार हुन थालेको छ। चल्तीमा नरहेका अनलाइनका नाममा यस्तो रातो नम्बरबाट दुर्घटना भएको र मानिसको समेत मृत्यु भएको समाचार फैलिएको छ। तर, यसरी फै..
मधेसवादी दलमा आर्थिक संकट : कार्यालय नेताकै घरमा
२० पुस । लामो समयसम्म सरकारमा नगएको मधेसी दल आर्थिक संकटमा परेका छन् । आर्थिक संकटकै कारण केहि दलले पार्टी कार्यालय नेताकै घरमा सारेका छन्, भने केहिले पार्टी कार्यालय राखेको घरको भाडा तिर्न सकेका छैनन् । राजकिशोरले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको बिजुलीबजारबाट गौरीघाटस्थित उनकै घरमा ..
मन्त्रिपरिषद् बैठक कुर्दा ‘गैरकानुनी थुना’
२० पुस । विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मै फाइल पठाउनुपर्ने पछिल्लो अभ्यासका कारण ‘गैरकानुनी थुना’ को जोखिम बढेको छ । यसअघि गृह सचिवबाटै देश निकालाको निर्ण हुने गरेकामा चार महिनाअघि सर्वोच्चले नेपाल सरकारको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि व्यवहारिक जटिलता आइपरेको हो । गैरकानु..
संशोधन पास गराउने कसरतमा मोर्चा, गच्छदारलाई पनि भेटे
२० पुस । संविधान संशोधन प्रस्तावको स्वामित्व लिन आखिरी घडीमा तयार देखिएको मधेसी मोर्चाले अरू राजनीतिक दलसँग संवाद तीव्र पारेको छ ।विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासँग संवाद थालेका मोर्चा नेताले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्न आग्रह गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित फोरम..
बोनस खान आयल निगमको मनपरी खर्च
२० पुस । नेपाल आयल निगमले उपभोक्ताबाट पूर्वाधार विकास शीर्षकमा संकलन गरेको अर्बौं रूपैयाँ रकम नियम मिचेर ऋण तिरेको तथ्य फेला परेको छ। निगमलाई छिटो नाफामा लगेर बोनस खान पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्तासँग पूर्वाधारको लागि भन्दै लिइएको रकम विधि मिचेर रकमान्तर गरी ऋण तिरेको हो। यसैगरी ऋण तिरेपछि निगम नाफामा गएको देखाइएको छ। निगमको विनि..
२० पुस । धबाङ–८ रोल्पाकी मनसरा डाँगी अहिले १९ वर्षकी भइन्। सत्र वर्षको कलिलो उमेरमा धबाङ–८ रोल्पाका २० वर्षीय सुरेश पुनको मायाजालमा परेपछि उनी परिवारको स्वीकृतिमा २०७१ साल मङ्सिर २९ गते वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएकी हुन् । विवाहपछि एकअर्काका बीचमा अनेक चाहना र बाध्यताहरु सुरु हुन थाले। विवाह भएको करिव २ वर्षमै डाँगीले २०७३ साल मङ्स..
२० पुस । सरकारले ६ दशकपछि हवाई यात्रुको बिमा रकम बढाउने तयारी गरेको छ । साविकको भन्दा करीब ६ गुणासम्म रकम बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ । हाल प्रतियात्रु २० हजार अमेरिकी डलर रहेको यात्रु बिमा रकम अन्तरराष्ट्रियतर्फ १ लाख १३ हजार र आन्तरिकतर्फ ५० हजार डलर पुर्‍याउने सरकारको तयारी छ । नेपालले हवाई यात्रुको बिमा […]
२० पुस । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै संविधान संशोधन विधेयक नरोकिने संकेत पाएपछि सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ जुटाउन सक्रिय भएका छन्। सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव मंगलबारै संसद्मा पेस गर्ने सत्ता घटकको तयारी भए पनि त्यसैलाई देखाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्र..
सहमति जुटाउन संसद् बैठक स्थगित
२० पुस । सहमति प्रयासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समय माग गरेपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आउँदो आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । पुस २४ अघि संविधान संशोधनको विषय वा प्रक्रियामा सहमति खोज्ने दलीय प्रतिबद्धता अनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीले छ दिनका लागि बैठक स्थगित गरेकी हुन् । राजनीतिक दलहरूबीचमा भइरहेको पछिल्लो औपचारिक र अनौपचा..
२० पुस । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका परमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा सुस्तता आउनुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीले बुधबार मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेस गर्न तयारी गरेको स्वेत पत्र शैलीको स्पष्टीकरणमा उक्त आरोप लगाएका हुन् । प्रधानमन्त्री..
सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले लचिलो
१९ पुस । संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने अडान राखेर संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद् खुलाउन लचक देखिएको छ। सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको दाबीसहित संविधान संशोधन विधेयक छलफलका लागि रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार त्यस्तो आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेलग..
१९ पुस । सरकारले पहिलोपटक स्पष्ट परिभाषा सहितको आर्थिक नीति ल्याउने भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न तथा यसलाई चलायमान बनाउन ठोस र मूर्त परिभाषा सहितको आर्थिक नीति नभएको भन्दै सरकारले यस्तो नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । चालू आवको चैत मसान्तभित्रै नीतिको मस्यौदा तय गर्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । [&he..
१८ पुस । उपत्यकाको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन बागमती करिडोर सडक निर्माण सात महिनाभित्र पूरा हुने भएको छ । अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिले गोकर्ण दोभानदेखि बल्खुसम्मको १७.६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्दै आएको छ। समितिका अनुसार ११.०५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी ६.५ किलोमिटर सडक निर्म..